Dhagaxyo uu dahab ku dahaaran yahay oo laga soo qufay Australia - BBC News Somali
Dhagaxyo uu dahab ku dahaaran yahay oo laga soo qufay Australia
Lahaanshaha sawirka RNC MINERALS
Image caption Dhagaxa ugu weyn waxaa laga helay in ka badan 2,400 oo wiqiyadood
Macdan qodeyaasha ku sugan galbeedka waddanka Australia ayaa sheegay in ay heleen labo dhagax oo aad u waaweyn oo uu dusha uga daboolan yahay dahab, kuwaasoo midkiiba qiimihiisu uu noqonayo malaayiin doollar.
Dhagaxyadaan midkooda weyn oo culeyskiisu uu la egyahay 95 kiilo ayaa wuxuu ku raran yahay dahab qiyaastiisu dhantahay 68 kiilo, sida ay sheegtay shirkad macdanta qodda oo laga leeyahay Canada oo lagu magacaago RNC Minerals.
Shirkaddaan ayaa sheegtay in usbuucii la soo dhaafay ay dahab qiimihiisu dhan yahay 15 malyan oo doollarka Canada ah ka soo qodday god macdan oo u dhow magaalada Kalgoorlie.
Mid ka mid ah injineerrada macdanta ayaa arintaan ku tilmaamay "mid aad xad dhaaf u ah oo ay qeyrul caadi tahay in la helo".
Qalbac dheeman ah oo lagu kala gatay $53 milyan
Dheeman weyn oo laga helay Sierra Leone
Image caption Halka dahabka lagu arkay ayaa ah meel macdanta laga qodo
"Dadku wali wey helaan dahabka xajmiga weyn leh laakiin waa wax aan ka badneyd dhowr kiilo," ayuu yiri Prof Sam Spearing oo ah agaasimaha iskuulka macdanta ee galbeedka Australia, isagoo ku sugnaa jaamacadda Curtin University.
Shirkaddan ka shaqeysa howlaha macdanta ayaa dhgaxyadaas midka weyn ku qiimeysay lacag dhan 4 malyan oo doollarka Canada ah.
Waxay sidoo kale sheegtay in dhagaxa labaad ee weyn uu culeyskiisu la egyahay 63 kiilo uuna ku dahaaran yahay dahab dhan qiyaastii 45 kiilo - oo qiimihiisuna yahay 2.6 malyan oo doollarka Canada ah.
Dhanka kale, masuuliyiinta shirkadda ayaa intaas ku daray in dhagaxaantan ay ka sameysan yihiin maadada quartz oo u eg sida dhalada.
Prof Spearing ayaa BBC-da u sheegay in sida caadiga ah ay shirkadaha macdanta soo saari jireen dahab yar oo aan ka badneyn 2g.
"Waa mid aad iyo aad cajiib u ah inaan aragno xaddigaan oo kale. Tani waa mid xad dhaaf ah oo lagu farxo," ayuu yiri Prof Spearing.
Ka hor inta aan isbuucii la soo dhaafay la helin dhagaxaantan dahabka ku dahaaran yahay, shirkadaha macdanta ayaa sida caadiga ah uga shaqeyn jiray soo saarista macdanta nooca loo yaqaanno nickel.
Madaxa ugu sarreeya shirkadda RNC Minerals Mark Selby ayaa sheegay in dhagaxyadaan dhawaan la geyn doono suuqa dadweynaha.